Sida loo Play WMA on Samsung Galaxy Taxanaha (Galaxy S4, S3, S2, S)
> Resource > Samsung > Sida loo Play WMA on Samsung Galaxy Taxanaha (Galaxy S4, S3, S2, S mid ahaa)
Qaar badan oo dadka isticmaala Samsung Galaxy (Galaxy S4, S3, S2, S mid ahaa) waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin sida dhibaato guud, marka ay wareejiyo ay WMA files audio qalabka Galaxy, files aan la aqoonsan karin. Waa maxay dhibaatada? Waxaa laga yaabaa in DRM ama variable heerka yara iwm waa arin. Waxba ma ahan wixii sabab yahay, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waxa la qaban karaa si fudud oo dhaqso.
Waxa uu awood u leeyahay inuu u rogo files WMA in ay la jaan qaada qalabka Galaxy nooc kasta. Xitaa haddii files WMA la ilaaliyay by DRM, app this si toos ah u soo saari doonaa ka dibna badalo files si ay ugu ekaato qalab Samsung Galaxy. By jidkii, taas app weyn taageeraa oo dhan ee Samsung Galaxy Taxanaha, Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy S2 iyo Galaxy S. waxa Iyada oo, aad si xor ah ka ciyaari kara faylasha WMA on Gaxaxy Taxanaha S oo aan wax khasaaro audio.
(Fiiro gaar ah: version Mac ma xamili karaan faylasha WMA DRM.)
1 Import WMA files si WMA si Converter Galaxy
Tag bar menu this app, ka dib markii aad u ordo, ka dibna dooro Add Faylal ay fursad u jiraan xitaa your computer disk adag tahay in la soo dhoofsadaan files WMA aad rabto in aad si loogu badalo ka. Si kale ee soo dhoofsadaan files WMA waa in si toos ah jiidi oo iyaga hoos u ka PC in ay leeg- tahay diinta this app ee.
2 Dooro qalab ama MP3 format sida wax soo saarka
Marka hore, la furo liiska qaabka wax soo saarka this app ee. Si aad u samayn, waxaad riixi kartaa image qaabka guddiga Qaabka wax soo saarka. Markaas, ee soo socda liiska qaabka wax soo saarka, waxaad u baahan tahay in ay galaan "Device"> "Samsung" category. Halkan, waxaad ka heli kartaa oo dhan Taxanaha Galaxy Samsung. Kaliya dooro model Galaxy aad.
Dabcan, waxa kale oo aad dooran kartaa MP3 format sida wax soo saarka, u MP3 waxaa si buuxda u taageeray by qalabka Samsung Galaxy. Si aad u dooratid MP3, waxaad u tagi kartaa "qaab"> "Audio" category halkii.
3 Beddelaan WMA in Samsung Galaxy
Tag dib interface diinta this app ee, ka dibna riix badhanka badalo ku koonaha midig ee interface this. Hadda, waxa aad ka arki kartaa WMA si Converter Galaxy ayaa la bilaabo qaab beddelidda. Muddo ka dib, diinta kusoo dhamaan doono. Wakhtigan, ku dhacay fursad u Folder Open hoose ee suuqa si aad u ogaato wax soo saarka files audio. In taa, lagu xiro qalabka si aad u computer ka via cable, ka dibna tranfer wax soo saarka files audio in qalab Galaxy aad Raaxo.
Halkan fadlan hubi tutorial video ah.